साफ महिला फुटबल तयारी तीब्र, पाकिस्तानले भाग नलिने
तारा आचार्य, विराटनगर, १६ फागुन । विराटनगरमा आयोजना हुन लागेको पाचौं साफ महिला फुटबल च्याम्पियनशीपमा पाकिस्तानले समेत भाग नलिने भएको छ । पहिलो पटक राजधानी काठमाडौं बाहिर गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय
दसौं अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पिनसिपका लागि मेलिसा हङकङ जादै
काठमाडौं । दसौं अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पिनसिपमा सहभागी हुन मेलिसा खड्गी हङकङ जाने भएकी छन् । टप माउन्टेन तेक्वान्दो फेडेरेसन, हङकङको निमन्त्रणामा मेलिसा हङकङ जान लागेकी हुन् । मार्च ३ र
दुई कराते महासंघको महत्वपूर्ण एकीकरण
काठमाडौं, १५ फागुन । दुई कराते महासंघको महत्वपूर्ण एकीकरण भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य शम्भुप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा कराते महासंघ पुनर्गठन गरी बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा
१ नं. प्रदेश स्तरीय महिला फुटवलः झापा, ताप्लेजुङ्ग र उदयपुर विजयी
विकास घिमिरे, धनकुटा, १५ फागुन । धनकुटामा जारी ८ औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता–२०७५ अन्र्तगत १ नं. प्रदेश स्तरीय महिला फुटवल प्रतियोगितामा बुधबार सम्पन्न खेलमा झापा, ताप्लेजुङ्ग र उदयपुर विजयी भएका
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि प्रदेश ३ बाट टेबलटेनिस छनोट सुरु
काठमाडौँ १४ फागुन । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि प्रदेश ३ को टेबलटेनिस छनोट मंगलबारदेखि लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य एवं प्रदेश
स्पोर्ट्स मिटमा केभीएसलाई दोहोरो उपाधि
काठमाडौं, १४ फागुन । काठमाडौं विनायक शिक्षालय (केभीएस) ले जिसाका स्पोर्ट्स मिटमा दोहोरो उपाधि जितेको छ । केभीएस सिनियर ब्वाइज कबड्डी र जुनियर ब्वाइज फुटबलमा च्याम्पियन बन्यो । ग्रुप अफ
वेष्टइन्डिजकाे ‘ब्रेकथ्रु स्टार अवार्ड’ सन्दीप लामिछानेलाई
काठमाडौँ, १४ फागुन : नेपालका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले वेष्टइन्डिजको क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल)अन्तर्गत ‘ब्रेकथ्रु स्टार’को अवार्ड जितेका छन् । गत सिजनको सिपिएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीलाई प्रदान गरिने अवार्डअन्तर्गत
प्रदेश एक महिला फुटबलः तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग र ईलाम विजयी
विकास घिमिरे, धनकुटा, १३ फागुन । धनकुटामा हिजोबाट सुरु भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्र्तगत १ नम्बर प्रदेश स्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग र ईलाम
आइसीसी महिला टी–ट्वान्टी छनोटः चीनलाई हराउँदै नेपालद्वारा चौथो जित दर्ता
काठमाडौं, १३ फागुन । आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप अन्तर्गत एशिया क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगितामा नेपालले चौथो जित निकाल्दा चीनलाई ५ रनको झिनो अन्तरले हराएको छ । चीनमाथि सदैव भारी अन्तरको विजय
नवलपरासीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कुस्तीमा भारतीय कुस्तीबाज हावी
नवलपरासी, १२ फागुन । पश्चिम नवलपरासीको हकुईमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिताको उपाधि भारतको भारत रेलवे विभागका सव ईन्सपेक्टर अमित कुस्तीबाजले जितेका छन् । उनका प्रतिद्वन्दी दिल्लीका कार्तिके पहलवानलाई पछि पार्दै